प्रचण्डले ‘कि तँ छैनस् कि म छैन’ भनेपछि ईश्वर पोखरेल रिसले भए रातोपिरो, दिए कडा चेतावनी ! – yuwa Awaj
मंग्सिर १, २०७७ सोमबार 8
काठमाडौ : उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता नलिए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने भन्दैँ अहिलेसम्मकै कडा चेतावनी दिएका छन् । “प्रचण्डले पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वि’रूद्ध अत्यन्त संगिन आरो’पहरू लगाउनुभएको छ ।
प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत यी संगिन आ’रोपहरू २०७७ साल भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय विरू’द्ध र पार्टी एकताको भावनावि’रूद्ध छन्,” उनको निष्कर्ष छ । सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने पार्टी एकता गर्दा स्वीकार गरिएका आधार र मान्यता वि’परीत ‘कि तँ छैनस् कि म छैन’ भन्ने अत्यन्त असन्तु’लित र दु’राग्रहपूर्ण ढंगले अघि सारिएको उनले बताएका छन् ।
दुराग्रहका साथ प्रस्तुत ती प्रस्तावहरू फिर्ता लिएर एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥र्‍याउन अघि बढ्ने कि दु-र्भाग्य निम्त्याउने कार्यकर्ताको हातमा रहेको उनले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणाको अन्तिममा उनले भनेका छन्, “प्रचण्ड कमरेडले मात्र होइन नेकपाभित्रका सबैले यसको छिनोफानो गर्नैपर्छ ।”
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको वि’वाद उत्कर्षमा पुगेको छ । शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीवि’रूद्ध ग’म्भीर ला’ञ्छना लगाइएको भन्दै उनीपक्षीय नेताहरू रुष्ट बनेका छन् ।
यता पार्टी विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न अक’स्मात शितलनिवास पुगेका छन् । पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री ओली साँझ अकस्मात् शितलनिवास पुगेका हुन्।
शुक्रबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि अत्तालिएका ओली छलफलका लागि शितलनिवास पुगेका हुन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीमाथि थुप्रै आ’लोचना र आ’रोप लगाईएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरेर पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । गत बैशाखमा ल्याएको अध्यादेशलाई ब्यु’ताएर नेकपा फुटाउने र नेपाली काँग्रेसको सहयोगमा नयाँ सरकार बनाउने तयारी ओलीको रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।-अन्लाईन मार्ग
Prevनेपाल र गौतमसँग ओलीको छलफल – प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता गराउन आग्रह, साक्षी महासचिव !
Nextअधिकृतबाट राजीनामा दिएर प्रहरीका कुकुर स्याहार्न थालिन् देउती गुरुङ…हेर्नुहोस् ।